Ahoana ny fanahafana ny efijery hidin'ny Ubuntu amin'ny Ubuntu Lockscreen | Androidsis
Ubuntu Touch dia rafitra fikirakirana finday novolavolain'i kanônika ary natolotra tamin'ny fomba ofisialy volana vitsivitsy lasa izay, rafitra fandidiana izay nampanantena ny hametraka amin'ny fitaovana Android vitsivitsy na dia amin'ny fampiharana aza dia mijanona kely ihany ny fivoarany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manome soso-kevitra ny fangatahana antsoina aho Kitendry Lockscreen Ubuntu, fampiharana natao hakana tahaka izany Android ny efijery an'ny manidy / mamoha, ao anatin'izany ny fampandrenesana sy ny rafitra fiarovana azy, ny rafitra fiasan'ny kanônika ho an'ny Smartphone sy Takelaka.
1 Ubuntu Lockscreen Fitaovana lehibe
2 Ahoana no fomba fametrahana Ubuntu Lockscreen?
Ubuntu Lockscreen Fitaovana lehibe
Ny endri-javatra lehibe natolotr'ity fampiharana maimaim-poana tanteraka dia ny fitoviana amin'ny fampiharana tany am-boalohany natao ho an'ny Ubuntu Touch, sary vitsivitsy be pitsiny sy fanitsiana sasany azonay manasongadina ireto safidy manaraka ireto:
Hita amin'ny fiteny 13.
Rafitra fampandrenesana azo ahitsy tanteraka amin'ny alàlan'ny mpampiasa.
Endri-javatra azo idirana.
Rafitra fiarovana amin'ny PIN na Password.
Fandraisana mora amin'ny fanaraha-maso mpilalao mozika.
Widget amin'ny famantaranandro mahatalanjona.
Ahoana no fomba fametrahana Ubuntu Lockscreen?
Hametraka Kitendry Lockscreen Ubuntu terminal fotsiny no ilainay Android mihodinkodina izany Version 2.1 na avo kokoa, izay ahazoan-dàlana ity fampiharana ity amin'ny terminal rehetra eo amin'ny tsena ankehitriny.
Hametraka Kitendry Lockscreen Ubuntu Manana safidy roa isika, ny voalohany misintona azy mivantana avy amin'ny Play Store, na ny faharoa misintona ny apk mivantana avy amin'ny forum XDA, adikao amin'ny fitaovana ary miditra amin'ny rehetra File Browser mihazakazaka ny apk.
Raha misafidy ny safidy faharoa isika dia mampahatsiahy anao aho fa tsy maintsy manana alalana hametraka activated ianao fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra avy amin'ny fipetrahana terminal, raha tsy nomeninao alohan'ny hampandehanana ny apk, ny rafitra mihitsy no hanontany anao raha te hampandeha azy ireo ianao ary hanome anao ny safidy hidirana amin'ny fikirakirana.
Amin'ny lahatsoratra ho avy dia hazavaiko ny fomba hanovana ny antsika Android en Ubuntu Touch, mampiasa rindranasa maimaim-poana marobe izay hanome antsika endrika mitovy amin'ny an'ny rafitra fiasan'ny kanônika ho an'ny finday.
Fanazavana fanampiny - Samsung Galaxy S, Ubuntu OS Rom voalohany, Top 5 mpitantana rakitra maimaim-poana
Sintomy - Ubuntu Lockscreen avy amin'ny Play Store, Ubuntu Lockscreen.apk
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ubuntu Lockscreen, ilay fampiharana fanokafana Ubuntu Touch tena izy ho an'ny Android-nao
»… Na dia eo aza ny fampiharana azy dia mbola mijanona kely ihany ny fivoarany ..»
Mandainga! Amin'ny volana oktobra dia mivoaka ny kinova miorina voalohany an'ny Ubuntu Touch, fa anio azonao apetraka amin'ny alàlan'ny fanoloana ny android amin'ny telefaona Nexus 4 sy ny takelaka Nexus 7 voalohany (manana izany amiko aho) ary efa miasa io.
An0nimo Spain dia hoy izy:
2.019 Desambra, andro 22 ...
Velona ary misy fanavaozana ny Ubuntu Touch, na dia tsy narahin'i Canonical aza izany, raha nanao UBPORTS ...
Amin'izao fotoana izao dia azo apetraka amin'ny terminal finday maro kokoa.
Ny programa fototra ao amin'ny magazay dia mbola vitsy ihany, fa raha mitady ilay güasap ianao dia mbola tsy manana izany raha manana kinova webapp ianao.
Misy TELEGRAM ao amin'ny magazay.
Maneho hevitra momba an'io hevitra io aho satria toa tsy manana an'ity karazana programa ity ianao dia lasa liana liana ny olona liana.
Raha mitady rafitra fikirakirana finday azo antoka ianao dia azo antoka izany.
Mikaroha amin'ny Internet toy izao: «UBPORTS».
2019 - DESAMBRA.
Mamaly an'i An0nimo Spain